Iindaba -Phonononga ii-horizons ezintsha ze-5G ezizisa kwi-Intanethi yeZithuthi kunye nonxibelelwano lweV2X
I-ITProPortal ixhaswa ngabaphulaphuli bayo. Xa usenza ukuthenga ngekhonkco kwiwebhusayithi yethu, sinokufumana ikhomishini yokubambisana. Funda nzulu
Ngoku sine-Intanethi yetekhnoloji yeZithuthi (V2X), sinombulelo ngokudityaniswa kwetekhnoloji ye5G kunye nezisombululo zesoftware yeemoto zokuphuhlisa isizukulwana esitsha seemoto ezikrelekrele.
Ukuqhagamshelwa kwezithuthi sisisombululo esinomdla esinciphisa iingozi zendlela ezindleleni kwihlabathi liphela. Ngelishwa, kwi-2018, iingozi zendlela zithathe ubomi babantu abayi-1.3 yezigidi. Ngoku sine-Intanethi yeThishini leZithuthi (V2X), sinombulelo ngokudityaniswa kwetekhnoloji ye5G kunye nezisombululo zesoftware yeemoto kuphuhliso lwesizukulwana esitsha seemoto eziphucukileyo ukuphucula amava omqhubi kunye nokubekwa ngokutsha kweemoto ukuba ziphumelele.
Izithuthi ngoku zinxibelelana ngakumbi nangakumbi, zinxibelelana nokusetyenziswa kokuhamba ngenqanawa, izinzwa zebhodi, izibane zendlela, iindawo zokupaka kunye nezinye iinkqubo zeemoto. Imoto ilungelelanisa imeko-bume engqongileyo ngokusebenzisa izixhobo ezithile zokubamba (ezinje ngeekhamera zedashboard kunye nee-radar sensors). Izithuthi zenethiwekhi ziqokelela inani elikhulu ledatha, njenge-mileage, ukonakala kwezinto ze-geolocation, uxinzelelo lwevili, inqanaba lokulinganisa amafutha, imeko yokutshixwa kwezithuthi, iimeko zendlela, kunye neemeko zokupaka.
Uyilo lwe-IoV lwezisombululo zeshishini leemoto luxhaswa zizisombululo zesoftware, ezinje ngeGPS, iDSRC (unxibelelwano olufutshane olunikezelweyo), iWi-Fi, i-IVI (infotainment yeemoto), idatha enkulu, ukufunda ngomatshini, i-Intanethi yezinto, izinto ezingezizo Ubukrelekrele, iqonga le-SaaS, kunye nonxibelelwano lwebhendi ebanzi.
Itekhnoloji yeV2X izibonakalisa njengolungelelwaniso phakathi kwezithuthi (V2V), izithuthi kunye neziseko zophuhliso (V2I), izithuthi kunye nabanye abathathi-nxaxheba bezithuthi. Ngokwandiswa, ezi zinto zintsha zinokuhlala abantu abahamba ngeenyawo kunye nabahambi ngebhayisikile (V2P). Ngamafutshane, uyilo lwe-V2X lwenza iimoto ukuba "zithethe" kwabanye oomatshini.
Isithuthi kwinkqubo yokukhangela: Idatha ekhishwe kwimephu, i-GPS kunye nezinye izixhobo zokukhangela isithuthi zinokubala ixesha lokufika kwesithuthi esilayishwayo, indawo eyenzeke kuyo ingozi ngexesha lenkqubo yebango leinshurensi, idatha yezembali yocwangciso lwedolophu kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni, njl. .
Imoto kwizibonelelo zothutho: Oku kubandakanya imiqondiso, iingcebiso zendlela, iiyunithi zokuqokelela, iindawo zokusebenza kunye neendawo zemfundo.
Imoto kwinkqubo yothutho lukawonke-wonke: Oku kuvelisa idatha enxulumene nenkqubo yezothutho lukawonkewonke kunye neemeko zendlela, ngelixa kucetyiswa ezinye iindlela xa kusenziwa izicwangciso kwakhona zohambo.
I-5G sisizukulwana sesihlanu sonxibelelwano lweeselfowuni. Ngokusisiseko, uluhlu lwenqanaba lokusebenza liphezulu kune-4G, ke isantya sonxibelelwano siphindaphindwe kalikhulu kune-4G. Ngolu phuculo lomthamo, i-5G ibonelela ngemisebenzi enamandla ngakumbi.
Inokuqhubekeka idatha ngokukhawuleza, inike i-4 millisecond phantsi kweemeko eziqhelekileyo kunye ne-1 millisecond phantsi kwesantya sokuqinisekisa ukuphendula okukhawulezileyo kwezixhobo ezixhumeneyo.
Okulusizi kukuba, kwiminyaka ephakathi yokukhutshwa kwayo kwe-2019, ukuphuculwa kwabanjwa kwimpikiswano kunye nobunzima, eyona nto ibaluleke kakhulu kubudlelwane bayo nengxaki yezempilo yehlabathi. Nangona kunjalo, ngaphandle kwesiqalo esinzima, i-5G ngoku iyasebenza kwizixeko ezingama-500 e-United States. Ukungena kwehlabathi kunye nokwamkelwa kwale nethiwekhi kusondele, njengoko uqikelelo lwe-2025 lubonisa ukuba i-5G iya kukhuthaza isinye kwisihlanu se-Intanethi.
Inkuthazo yokuhambisa i-5G kwitekhnoloji yeV2X ivela kukufuduka kweemoto ziye kwisiseko seselfowuni (i-C-V2X) -Le yeyona nto iphambili kwaye iphambili kushishino lokuziqhelanisa nezithuthi ezizimeleyo. Izigebenga ezaziwayo zemveliso ezinje ngeAudi, iFord kunye neTesla zixhobise izithuthi zazo ngobuchwephesha beC-V2X. Ngokomxholo:
IMercedes-Benz isebenzisene noNokia kunye neTelefonica Deutschland ukufaka iimoto ezixhumeneyo ezizimeleyo ze5G kwisigaba semveliso.
I-BMW isebenzisane ne-Samsung kunye ne-Harman ukumilisela i-BMW iNEXT exhotyiswe ngeyunithi yolawulo lwe-telematics ese-5G (TCU).
I-Audi yazisa ngo-2017 ukuba izithuthi zayo ziya kuba nakho ukusebenzisana nezibane zendlela ukuze zilumkise xa umqhubi etshintsha ukusuka kobomvu ukuya kohlaza.
I-C-V2X inokubakho okungenamda. Izinto ezisetyenzisiweyo zisetyenzisiwe ngaphezulu kweedolophu ze-500, izithili kunye nezithili zemfundo ukubonelela ngoqhagamshelo oluzimeleyo lweenkqubo zothutho, izibonelelo zamandla kunye nezixhobo zokwakha.
I-C-V2X izisa ukhuseleko ezindleleni, ukusebenza ngokukuko kunye namava omqhubi / wabahambi ngeenyawo (umzekelo olungileyo yinkqubo yesilumkiso sezithuthi). Ivumela abatyali mali kunye neetanki zokucinga ukuba baphonononge iindlela ezintsha zophuhliso olukhulu kwizimo ezininzi. Umzekelo, ngokusebenzisa izinzwa kunye nedatha engokwembali ukwenza "ubuchwephesha bedijithali", ukuqhuba okulungelelanisiweyo, ukuthintela ukungqubana kunye nezilumkiso zokhuseleko zinokufezekiswa. Masibe nokuqonda okunzulu kwezicelo ezininzi zeV2X exhasa i5G.
Oku kubandakanya uqhagamshelo lwe-cybernetic yamaloli kuhola wendlela kwizithuthi. Ukulungelelaniswa kwesiphelo sithuthi kuvumela ukukhawulezisa okungqameneyo, ukuqhuba kunye nokuqhekeza, ngokwenjenje kuphucula ukusebenza kwendlela, konga ipetroli kunye nokunciphisa ukukhutshwa. Itrakhi ehamba phambili ichonga indlela, isantya kunye nokushiya ezinye iilori. Uthutho lweelori ezibotshwe ngo-5G luya kuqonda ukhuseleko kumgama omde. Umzekelo, xa iimoto ezintathu nangaphezulu ziqhuba kwaye umqhubi esozela, ilori izakulandela ngokuzenzekelayo inkokeli yeqela, ukunciphisa umngcipheko wozela. Ukongeza, xa ilori ekhokelayo isenza isenzo sokuphepha, ezinye iilori ngasemva nazo ziya kusabela ngaxeshanye. Abavelisi bezixhobo zokuqala njengeScania neMercedes bazise iindlela zendlela, kwaye amazwe amaninzi eUnited States amkele ukulandelwa kwelori ezizimeleyo. Ngokweqela leScania, iilori ezime emgceni zinokunciphisa ukukhutshwa okuye kuthi ga kwiipesenti ezingama-20.
Olu luphuculo lwenqwelo mafutha oluxhunyiwe kwindlela imoto inxibelelana ngayo neemeko ezinkulu zendlela. Imoto ene-V2X yoyilo inokusasaza ulwazi lwenzwa nabanye abaqhubi ukulungelelanisa iintshukumo zabo. Oku kunokwenzeka xa enye imoto idlula kwaye enye imoto icotha ngokuzenzekelayo ukulungiselela ukuqhuba. Iinyani zibonakalisile ukuba ulungelelwaniso olusebenzayo lomqhubi lunokucinezela ngokufanelekileyo ukuphazamiseka okubangelwa lutshintsho lweendlela, ukuqhaqha ngokukhawuleza kunye nemisebenzi engacwangciswanga. Kwilizwe lokwenyani, ukuqhuba okulungelelanisiweyo akunakwenzeka ngaphandle kwetekhnoloji ye5G.
Oomatshini baxhasa umqhubi ngokunika isaziso saso nakuphi na ukungqubana okuzayo. Oku kuhlala kuzibonakalisa njengokumiswa kwakhona kwe-steering oluzenzekelayo okanye ukunyathela ngokunyanzelwa. Ukulungiselela ukungqubana, isithuthi sihambisa indawo, isantya, kunye nendlela enxulumene nezinye izithuthi. Ngale teknoloji yokuqhagamshela isithuthi, abaqhubi kufuneka bafumane izixhobo zabo ezifanelekileyo ukunqanda ukubetha abahamba ngebhayisikile okanye abahambi ngeenyawo. Ukubandakanywa kwe-5G kuphucula lo msebenzi ngokumisela uluhlu olubanzi lonxibelelwano phakathi kwezithuthi ezininzi ukumisela indawo ngqo yesithuthi ngasinye xa kuthelekiswa nabanye abathathi-nxaxheba.
Xa kuthelekiswa nolunye udidi lwezithuthi, iimoto eziqhuba ngokwakho zixhomekeke ngakumbi kwimijelo yedatha ekhawulezayo. Kwimeko yokutshintsha kweendlela, ixesha lokuphendula ngokukhawuleza linokukhawulezisa ukwenza izigqibo ngexesha elifanelekileyo lomqhubi. Ukufumana indawo ngqo yabahambi ngeenyawo okanye ukuqikelela ukukhanya okulandelayo okulandelayo zezinye zeemeko apho itekhnoloji ibonisa ukuba kunokwenzeka. Isantya sesi sisombululo se-5G sithetha ukuba ukuqhubekekiswa kwedatha yefu nge-AI kwenza ukuba iimoto zenze izigqibo ezingancediyo kodwa zichanekile kwangoko. Ngokufaka idatha kwiimoto ezifanelekileyo, iindlela zokufunda ngomatshini (ML) zinokukhohlisa imeko yesithuthi; qhuba imoto ime, yehlise isantya, okanye uyiyalele ukuba itshintshe imizila. Ukongeza, intsebenziswano eyomeleleyo phakathi kwe-5G kunye nomda wekhompyuter inokuqhubekeka ngokuseta idatha ngokukhawuleza.
Into enomdla kukuba, ingeniso evela kwicandelo lezithuthi ngokuthe ngcembe lingena kumandla kunye necandelo leinshurensi.
I-5G sisisombululo sedijithali esizisa izibonelelo ezingenakuthelekiswa nanto kwihlabathi lezithuthi ngokuphucula indlela esisebenzisa ngayo unxibelelwano ngaphandle kwamacingo kukhangelo. Ixhasa inani elikhulu lonxibelelwano kwindawo encinci kwaye ifumana indawo efanelekileyo ngokukhawuleza kunayo nayiphi na itekhnoloji yangaphambili. Uyilo oluqhutywa yi-V2X ye-5G luthembeke kakhulu, kunye nokuhamba kancinci, kwaye lunothotho lwezibonelelo, ezinje ngonxibelelwano olulula, ukubamba idatha ngokukhawuleza kunye nokuhambisa, ukhuseleko ezindleleni oluphuculweyo kunye nolungiso oluphuculweyo lwezithuthi.
Bhalisa apha ngezantsi ukuze ufumane ulwazi lwamva nje kwi-ITProPortal kunye nezibonelelo ezizodwa ezithunyelwe ngqo kwibhokisi yakho engenayo!
I-ITProPortal yinxalenye ye-future plc, eliqela leendaba lehlabathi kunye nomshicileli ophambili kwidijithali. Ndwendwela iwebhusayithi yethu yenkampani.
© I-future Publishing limited Quay House, i-Ambury, iBath BA1 1UA. onke Amalungelo Agciniwe. INgilani kunye neWales inombolo yobhaliso lwenkampani 2008885.